Hoggaanka u dhiirranaada — TRIP LEE - SITE RASMIGA AH
Hoggaanka u dhiirranaada
Halkan hoggaanka u dhiirranaada MLK ayaa soo bandhigay (in aan ku xuso qaar ka mid ah qoraal ugu fiican ee aan abid akhriyo). Waxa uu diiday in ay qaataan sharciyo dulmi iyo diido inuu samir ku sug. Wuxuu bilaaba ka wakiil ah tartanka oo dhan dadka. Sida nin madow, Waxaan si qoto dheer ugu mahadcelinayaa Ilaah ahay, shuqulka dhammaado xaggiisa. Oo sida isagoo Masiixi ah, Waxaan doonayaa inaan si ay ula dagaalamaan caddaalad kaliya u adag yahay sida uu sameeyey, haynta ku hay in Ciise keliya keeni karaan caddaaladda kaamil ah. Oo wuxuu Doono.
Tani waa hoostana aad ka warqad caan MLK ee. Waa in aad ka akhrisan wax oo dhan marka aad fursad u hesho.
"Waannu ku sugaynay, in ka badan 340 sano xuquuqda our dastuurka oo Ilaah siiyey. The quruumaha Asia iyo Africa waxaa la xawaaraha jetlike hulaaqaya helo madaxbannaanida siyaasadeed, laakiin waxaan weli Socda faraska iyo buggy xawaaraha xagga helo koob bun ah ee counter qado. Waxaa laga yaabaa in ay tahay u fududahay kuwa aan waligood dareemay demisaan beegan kalasaar in la yidhaahdo, "Sug." Laakiin markii aad aragteen Lynch mobs sharta hooyooyinka iyo awowayaashiin ugu doonista iyo Maansheeyo Walaalo ah oo walaalahaa at lo'dii; markii aad aragteen Booliska nacaybka buuxsantay habaaraa, laado iyo xitaa dilaan aad walaalo madow iyo gabdhoba; marka aad aragto tirada ugu badan ee aad iyo labaatan milyan oo walaalo ah Negro smothering in qafis ah hawadu saboolnimada ku dhex jira bulshada ah loo nicmeeyay anagu ka; marka aad si lama filaan ah aad carrabka helayo qaloocdo iyo hadal qalaad sida waxaad doonaysaan inaad sharaxdo gabadhaada lix sano jir ah sababta aan si park dadweynaha dheeldheel in hadda la xayaysiiyo on telefishanka tegi kartaa, oo arag ilmada duulayaan indhaha iyada in markay la sheegay in uu xiran yahay Funtown carruurta midab, oo waxaan arki doonaa daruuraha tallaabo gadaal of inferiority laga bilaabo si ay u sameeyaan in iyada samada maskaxda yar, oo waxaan arki doonaa iyada laga bilaabo si ay u xumeeyaan iyada shakhsiyadda by horumarinta qadhaadh ah miyir xagga dadka cad; marka aad leedahay si hawga jawaab wiil jir ah shan sano ah oo lagu weydiinaya: "Daddy, sababta ay dadku u cad daaweeyo dadka midab si ula jeeddaan?"; marka aad qaadato drive a gobolka iskutallaabtiisa u arkaan in ay lagama maarmaan tahay in ay seexdaan habeenba habeenka ka dambeeyaa in labada geesood raaxo aad gaari maxaa yeelay ma albeergo idin aqbali doonaa; marka aad maalin iyo maalin dullooba baxay calaamooyin kabashadiisa reading "cad" iyo "midab"; marka aad magaca koowaad noqdo "nigger,"Magacaaga dhexe noqdo" Wiil " (Si kastaba ha ahaatee jir ayaad tahay) iyo Magaca awoowe noqdo "John,"Iyo naagtaada, iyo hooyadeed waxaa lagu marnaba siiyey horyaalka ixtiraamo" Mrs. "; marka aad harried by maalin iyo habeen dabataagan by by xaqiiqada ah in aad tahay Negro a, ku nool si joogto ah ugu mowqifka tiptoe, marna arrin garanaya waxa ay ka sugayaan soo socda, oo la ciirsan yihiin cabsi gudaha iyo diidmadu dibadda; marka aad weligiis dagaal dareen degenerating ah "nobodiness" waa Umuuraha aad fahmi doonaa sababta aan u arkaa in ay adag tahay in ay sugaan. Waxaa jira yimaado waqti marka koobkii dulqaadasho waddaa ka badan, iyo dadka u ma sii diyaar u ah inay la soo siibno yaamayska of quusan galay. Waxaan rajeynayaa, niman yahow, aad fahmi kartaa samir la'aanta sharciga iyo lama huraan. Waxaad muujiyaan heshiis weyn oo walaac ka badan noo diyaar in ay jebiyaan sharciyada. Hubaal waxa tani ay walaac sharci ah. Tan iyo markii aan si aad u dadka ku boorinayaa in uu u hogaansamo go'aanka Maxkamadda Sare ee 1954 mamnuucyada kalasaar ee dugsiyada dadweynaha, at jaleecada hore waxaa laga yaabaa in ay u muuqato halkii socda noo og in ay jebiyaan sharciyada. Mid ka mid ah si fiican u weydiisan kartaa: "Sidee u difaaci karta jebinta sharciyada qaar ka mid ah iyo kuwo kale oo la addeeco?"Jawaabta been in xaqiiqda ah in ay jiraan laba nooc oo ah sharciyada: kaliya oo xaqa daran. Waxaan noqon lahaa ugu horeeyay ee u ololeeya addeecaya kaliya sharciyada. Mid ka mid ah uu leeyahay oo keliya ma aha sharci ah laakiin masuuliyad moral inuu adeeco sharciyada kaliya. taa waxaa ka duwan, mid ka mid ah ayaa ka masuul ah in moral Caasiya sharciyada dulmi. Anigu waxaan oggolahay lahaa St. Augustine in "sharciga aan caddaalad ahayn sharci jirin at dhan."
-Martin Luther King Jr., Warqad ka timid Xabsiga Birmingham a
BornWithPurpose • August 19, 2013 at 8:33 waxaan ahay • Reply
Tani waa sida dayi sharaxayaa waxa takoorka ekaa. Waa xitaa adag ka fikirin in cadaalad darada ah ee ilaa xad aan xitaa hal boqol oo sano ka hor. MLK ahaa dagaalyahan oo motivator cajiib ah Ilaah loo isticmaalo. Mid ka mid ah xigasho oo aan jeclaa ee waqtiga oo dhan…. ” Gudcurka kuma eryi karo gudcur, Light oo kaliya samayn kartaa in. Nacaybka ma ay eryi karo nacaybka, kaliya Love samayn karaa in.”
Sean • August 19, 2013 at 8:33 waxaan ahay • Reply
Marna bilaabi xukun la kaashanaya la mid ah 'laakiin', ama 'sida'.